Imininingwane Yokuthweswa Iziqu »IHodges University
Uyemukelwa Abathweswe Iziqu zeHodges !!!
Siyakuhalalisela ngokuthola iziqu zakho nokuthatha isinyathelo esilandelayo ekusaseni lakho. Sijabule kakhulu, futhi sonke siyaziqhenya ngani! Yize lesi sahluko singafinyelela esiphethweni, kumane kuyisiqalo samathuba amaningi i-degree yakho entsha eyoyinikeza ohambweni lwakho oluzayo.
Silangazelela ukukubona kulo nyaka ku Umkhosi Wama-31 Wokuqala!
Ukuqala kokuthweswa iziqu kweHodges University
Usuku: NgeSonto, ngoJuni 20, 2021
Isikhathi: 4:00 pm
Indawo: IHertz Arena, 11000 Everblades Parkway, Estero, Florida 33928
Yazi Ngaphambi Kokuya Ngolwazi
Unyaka nonyaka, umkhosi wokuthweswa iziqu ungumcimbi obaluleke kakhulu wezifundo iHodges University eyenzela abafundi nawo wonke umndeni wakwaHodges. Kungumvuthwandaba weminyaka yokusebenza kanzima, ukubekezela, nokuzibophezela kwabafundi nemindeni ngokufanayo. Usuku olufana nalolu kufanele lugujwe. Okwethu Umkhosi Wama-31 Wokuqala izohlonipha imikhosi yendabuko ehambisana nokugubha impumelelo yakho yezifundo. Umcimbi Wokuqala walo nyaka uvulekele noma yimuphi umfundi othweswa iziqu kuwo Juni 6, 2019 kuya kuMeyi 2, 2021.
Ngezansi, sinikeze uhlu lokuhlola lokuthweswa iziqu olwenzelwe ukukulungiselela usuku lokuthweswa iziqu nokuphendula imibuzo ephathelene nomkhosi wokuthweswa iziqu. Lolu hlu lokuhlola lungena esikhundleni sokuprakthiza okusemthethweni. Uyacelwa ukuthi ubuyekeze isigaba ngasinye ukuthola eminye imininingwane oyodinga ukuyilungiselela umhlaka-20 Junith Usuku Lokuthweswa Iziqu.
1. Qedela Zonke Izidingo Zezinga
Kungumsebenzi womfundi ngamunye ukuqedela ifomu le-Intent to Graduate ekuqaleni kweseshini yakhe yokugcina. Uyacelwa ukuthi uqinisekise ukuthi ubonile noMeluleki Wokuhlangenwe Nakho Kwezitshudeni ukuqinisekisa ukuthi uhlangabezane nazo zonke izidingo zeziqu zeNyuvesi njengoba kuphawuliwe kukhathalogi yeyunivesithi. Uma ungahlangabezani nazo zonke izidingo, iziqu zakho ngeke zinikezwe kuze kuhlangatshezwane nazo zonke izidingo. Sicela ukhumbule ukuthi kungumsebenzi wakho ukuqinisekisa ukuthi zonke izidingo ziyahlangatshezwa.
2. Hlela i-Cap yakho, ingubo, ne-Tassel
Abafundi abafisa ukubamba iqhaza emkhosini wokuthweswa iziqu kudingeka ukuthi bathenge i-Graduation regalia (cap, gown and tassel) kungakadluli isikhathi May 21, 2021. Abafundi bayakhuthazwa ukuthi ba-ode ama-regalia abo kusenesikhathi ngaphambi kwalesi sikhathi esinqunyiwe ukuqinisekisa ukulethwa ngesikhathi esifanele. Lokhu kuthenga akufakiwe njengengxenye yemali yokuthweswa iziqu. Lezi zinto zinga-odwa online ku UHerff Jones noma mathupha emcimbini wokugubha iziqu.
3. Hlonipha Izintambo, Izindwangu, Nezikhonkwane
Lezi zinto ezihloniphekile ziyatholakala ukuze zilandwe ekhempasini yaseFort Myers, noma ungacela umngani noma ilunga lomndeni ukuthi likuthathele izintambo. Ungabathatha futhi ngosuku lokuqala.
4. Oda ukuthweswa iziqu kwezithombe
IHodges University iqashe iGradImages njengomthwebuli wezithombe osemthethweni ngokusemthethweni womcimbi wethu wesikole kanye / noma wokuqalisa. Izithombe ezintathu zesitshudeni ngasinye zithathwa phakathi nomcimbi:
Njengoba wenza indlela eya esiteji.
Njengoba uxhawula uMengameli maphakathi nesiteji.
Ngemuva kokuthi usuphumile esiteji.
Ubufakazi bakho buzobe bulungele ukubuka ku-inthanethi ngokushesha emva kwamahora angama-48 ngemuva komcimbi. Noma kungenasibopho soku-oda, uzokonga ama-oda angamaphesenti angama-20% ka- $ 50 noma ngaphezulu ngokubamba kwakho iqhaza. Ukubhalisa ngaphambilini kumane kuyindlela yokuqinisekisa ukuthi imininingwane yakho yokuxhumana isesikhathini namaGradImages, ukuze bakwazi ukuhlinzeka ngobufakazi bakho obusizayo ngokushesha okukhulu. Ukuze ubhalise ngaphambili kobufakazi bakho bokuqala, sicela uvakashele I-GradImages.
Njengengxenye yokuthweswa iziqu kwakho nokubamba iqhaza ngaphambi kokubhalisa, amaGradImages azokuthumela ama-imeyili, athumele ubufakazi bokuthwebula izithombe ngephepha, futhi angathumela izaziso zemiyalezo yombhalo ongayikhetha.
5. Qedela Zonke Izidingo Zezinga
Abangahle bathweswe iziqu kumele baphase futhi bagcwalise zonke izidingo zamadigri nge Kwangathi 2, 2021, ukuze ubhalwe ohlwini loHlelo Lokuqalisa.
Sicela uqiniseke ukuthi uvuselela yonke imininingwane yakho ngeHhovisi Lombhalisi. Imininingwane ephrintwe kwidiploma yakho izonqunywa ngolwazi esinalo efayeleni lakho. Ama-diploma azothunyelwa kubafundi ekhelini elisefayilini.
Sinxusa bonke abafundi ukuthi babheke isimo se-akhawunti yabo neHhovisi lama-Akhawunti Wabafundi ngaphambi kokuqala. Uyacelwa ukuthi wazi ukuthi ukwehluleka ukwanelisa zonke izibopho zezezimali neyunivesithi kungakuvimbela ekutholeni idiploma yakho kanye / noma okubhaliwe ngesikhathi esifanele.
Ulwazi Lomfundi Ophothula Iziqu
Sicela uhlele ukufika kungakadluli u-1: 30 ntambama ukuze kubuyekezwe imiyalo yomkhosi.
Lapho befika, abathweswe iziqu bangangena ngokungena eMpumalanga kwenkundla yaseHertz.
Umuntu ngamunye othweswe iziqu uzothatha ikhadi lakhe legama ematafuleni asemuva kwesiteji. Amakhadi aprintwe negama lakho elisemthethweni kuwo futhi afanisa nalokho okuphrintwe kuhlelo Lokuqalisa.
Uma usuthole ikhadi lakho, sicela ugcwalise isigaba semininingwane yokuxhumana ngemuva kwekhadi lomthwebuli zithombe.
Leli khadi kufanele liphathwe nguwe lize linikezwe ummemezeli ngaphambi kokuwela isiteji.
Ikhadi lizophinda futhi nesihlalo sakho sibhalwe ekhoneni lesandla sokudla esingezansi.
Izihlalo zabathweswe iziqu bazokwabelwa inombolo yokuhlala ku-Section 115, 116, noma i-117 ngokwe-alfabhethi, futhi ngohlelo.
Sicela wazi ukuthi ukuze ufike esihlalweni sakho, kufanele uhambe phezulu. Uma lokhu kuyinkinga sicela wazise abasebenzi basenyuvesi ngaphambi kosuku lokuqala ukusebenza.
Qiniseka ukuthi unekhadi legama lakho ngaphambi kokuthi uqale udwendwe.
Kuzongeniswa amakepisi nemidanso eyengeziwe kulo mcimbi uma okwakho kudinga ukushintshwa ngakho sicela ubheke umuntu osebenza enyuvesi uma unenkinga. Uyacelwa ukuthi wazi ukuthi kuzoba nenani elilinganiselwe lama-cap and gown angeziwe emcimbini; uma kunezinkinga ngekepisi lakho kanye / noma ingubo yakho ezinsukwini ezi-4 noma ngaphezulu ngaphambi komkhosi, sicela ufike esikhungweni seFort Myers ukuzokhuluma neHhovisi Lezinsizakalo Ezisizayo mayelana nengubo yokufaka esikhundleni kanye / noma ingubo.
Ikhodi Yokugqoka Nokuziphatha
Sicela ulungele ukukhanya!
Kulindeleke ukuthi ugqoke ingubo ephelele yezemfundo (ikepisi, ingubo kanye nentambo yokuhlonipha noma i-hood yenkosi, uma kufanele) isikhathi somkhosi wokuthweswa iziqu.
Abathweswe iziqu bazogqoka izigqoko zabo kanye nemijiva ngemuva kokufika eHertz Arena. Abasebenzi bazotholakala ukusiza.
Sicela ushiye zonke izinto eziyigugu nezinto zomuntu siqu nomndeni, abangane noma izivakashi.
Izembatho ezigqokwa ngokwesiko ngengubo:
Amadoda - ihembe lokugqoka elinekhola, amabhulukhwe amnyama, uthayi omnyama ocacile nezicathulo ezimnyama.
Abesifazane - ingubo emnyama, noma isiketi noma ibhulukwe nehembe, ngezicathulo ezimnyama, ezivaliwe. Izicathulo ezithende eziphakeme azinconywa. Ama-flip-flops, izicathulo zethenisi nezicathulo ezimhlophe akufanele zigqokwe.
Uma kudingeka, sicela ucindezele ingubo yakho ngensimbi epholile.
Ikepisi kufanele lilele phansi intshakaza ilenga ngaphambili kwesokudla. Abathweswe iziqu kufanele baqaphele ukuthi bangavumeli intshakaza iphazamise ngenkathi kuthathwa izithombe.
Uma kusebenza, izintambo zokuhlonipha kufanele zigqokwe entanyeni ngamachashazi alenga ohlangothini ngalunye. Izintambo zokuhlonipha zizosatshalaliswa ngokwenqubomgomo yaseyunivesithi:
Isiliva nokubomvu kwe-summa cum laude (3.90-4.0 GGPA);
I-Double Red ye-magna cum laude (3.76-3.89 GGPA); noma
Isiliva Esiphindwe kabili se-cum laude (3.50-3.75 GGPA).
Inyuvesi yenza yonke imizamo yokuhlela nokwenza umcimbi ozwakalayo, ohloniphekile. Ukuqashelwa kwempumelelo yakho kwezemfundo kufanele kubhekwe ngenhlonipho. Ukuziphatha okungalawuleki, ubudlwangudlwangu, noma ukuba khona kotshwala noma izidakamizwa kuzoba izizathu zokususwa ngokushesha futhi kungaholela ekutheni idiploma yakho igcinwe yunivesithi.
Abathweswe iziqu bayelulekwa ukuthi basebenzise izindlu zangasese ngaphambi kokuqala komcimbi, ngoba ngeke uvunyelwe ukushiya izihlalo zakho uma nje umcimbi usuqalile.
Abathweswe iziqu kudingeka ukuthi bahlale phansi kulo lonke uhlelo.
Abathweswe iziqu bahlala ezigabeni 115, 116, noma 117 ngokulandelana kwabo abazohamba banqamule isiteji. Leli oda lihambisana nendlela amadigri abhalwe ngayo ohlelweni lokuqala, ngokwe-alfabhethi, nangezinga.
Uzocelwa ukuthi wehlele endaweni yaphansi ngo-3: 30 ntambama Uzokwakha imigqa eminingi ngangokunokwenzeka ngemuva kwesiteji. Lapho udwendwe luqala, abafundi bazoqhubeka nokuthuthela endaweni yangaphansi ngokushesha okukhulu. Abafundi abafika sekwedlule isikhathi bazobekwa ngemuva kwabo bonke abanye abaphothule iziqu futhi kungenzeka bangahlali eduze kwabanye abahola iziqu ezifanayo nabakhulu. Sicela uqiniseke ukuthi ufika ngesikhathi.
USihlalo Omkhulu WeBhodi
Abazongenela iziqu zeBachelor
Izinhlelo zokuqalisa zizonikezwa lapho ungena esitezi esikhulu.
Faka isitezi esikhulu ngasenyakatho kwenkundla. Qhubeka uze uye emuva kwezihlalo, ujike kwesokudla, bese ujika ngakwesokudla futhi enkabeni yesikhungo.
Imininingwane Yomcimbi Wokuqala
Ngemuva kokuthi isipikha sesitshudeni nesihambeli sesiqediwe, umongameli uzocela bonke abazongenela iziqu ze-master ukuthi bacele ukuma.
Iziqu ze-Master zizobe sezinikezwa ngumongameli.
Lapho le ngxenye isiqediwe, uzobe usuthunyelwa endaweni yesiteji lapho uzohamba khona unqamule isiteji esisodwa ngasikhathi ukubona umuntu okhethwe kuqala.
Sicela ubanikeze ikhadi lakho elibhalwe phezulu ukuze akwazi ukufunda igama lakho.
Lapho nje ususa ikhadi lakho legama, qhubeka ungene esiteji njengoba kukhonjisiwe eshadini.
Indlela eyiyo yokwamukela ikhava yediploma evela kuDkt Meyer ingeyesandla sakho sobunxele. Bese, uxhawula ngesandla sakho sokunene.
Lokhu kuzoba lapho kuthathwa khona esinye sezithombe ngakho-ke sicela ukhumbule ukumamatheka.
IGrand Marshal izobe isiphendulela intshakaza yakho bese ixhawula isandla sakho.
I-Alumni Network izokunikeza isipho, futhi ubuhlakani buzokuhalalisela ngaphambi kokuba ubuyele esihlalweni sakho.
Sicela uhlale phansi lapho ubuyela esihlalweni sakho.
Abaphothule iziqu zeBachelor's, Associate, kanye nezitifiketi bazolandela izinqubo ezifanayo.
Uma uhleli kusigaba B, sicela ulandele izinkomba ezinikezwe ukungena esiteji bese ubuyela esihlalweni sakho.
Abasebenzi baseHodges University bazokwazisa ukuthi umugqa wakho ungaphuma nini.
Sicela ungami lapho ufika endaweni engemuva kwesiteji njengoba abanye abaphothule iziqu nabo bezama ukuhamba.
Zama ukuhlela kusengaphambili indawo yomhlangano nomndeni wakho nabangane njengoba ungaphuma enkundleni kusuka nhlangothi zombili ngemuva kwesiteji.
Umcimbi wokuqala bukhoma ungabukwa ekhasini lethu lasekhaya ngo-4: 00 ntambama ngoJuni 20, 2021.
Izikhombisi-ndlela eziya eHertz Arena
Ukusuka eNyakatho: Thatha u-I-75 ukuphuma ku-128 (Alico Road). Qonda empumalanga ku-Alico Road uye eBen Hill Griffin Parkway. Thatha uBen Hill Griffin cishe amamayela ayi-3.5 eningizimu. I-Arena itholakala ngakwesokudla.
Kusuka eNingizimu: Thatha i-I-75 ukuphuma ku-123 (Umgwaqo weCorkscrew). Qonda empumalanga kuCorkscrew Road. Thatha uBen Hill Griffin ubheke enyakatho kanti i-Arena itholakala ohlangothini lwesobunxele.
Indawo yokupaka ivula amahora amathathu ngaphambi koMkhosi Wokuqala.
Kukhona indawo yokupaka eyanele eHertz Arena ezindaweni zokupaka ezizungezile.
Akukho mali ekhokhiswayo yokupaka.
Imithetho kaHertz yokuletha izinto zomuntu siqu ***** Sicela ufunde
IHertz Arena inemithetho eqinile yalokho okungavunyelwe ukulethwa esikhungweni. Chofoza LAPHA ngaleyo mithetho, ezophoqelelwa ngokuqinile.
Izivakashi kufanele zifike phakathi kuka-3: 00 no-3: 30 ntambama
Inkundla inikezela ngezihlalo ezivulekile, awekho amathikithi adingekayo.
Ukuhlala kwabantu abakhubazekile kuyatholakala ezindaweni eziseNingizimu. Kukhona indawo evulekile yezihlalo ezinamasondo nezinye izihlalo ezimele. Isivakashi esisodwa singahlala nesihambeli esikhubazekile.
Sicela wazi ukuthi izinqola zabantwana, amabhaluni, nezimbali azivunyelwe enkundleni. Izithutha, amabhaluni nezimbali kuzohlolwa abasebenzi baseHertz futhi kugcinwa etafuleni elikhulu futhi kungalandwa ngemuva komkhosi.
Indawo eyodwa yemvume izovulelwa ukudla neziphuzo ohlangothini oluseningizimu yenkundla.
Abazali, umndeni, nabangane bayakhuthazwa ukuba bahlale phansi, njengoba ukushiya umkhosi kukhombisa ukungahloniphi okwedlulele kubo bonke abakhona.
Sicela ukhumbule ukuthi akekho umuntu ovunyelwe ukungena esitezi esikhulu noma emaphaseji ukuthatha izithombe.
Umthwebuli wezithombe osezingeni eliphezulu uqashiwe ukuthi athathe izithombe ezingazibophezeli zesifundo ngasinye.
Izithombe zingathathwa ngumndeni nabangane ezindaweni zokuhlala.
Iziqu ze-FAQ zabafundi
Ngingayaphi ngiyolanda izintambo zami zokuhlonipha?
Izintambo zokuhlonipha ziyatholakala ukuze zilandwe ekhempasini yaseFort Myers, noma ungacela umngani noma ilunga lomndeni ukuthi likucoshele izintambo. Ungabathatha futhi ngosuku lokuqala.
Ngingayilanda nini idiploma yami?
Njengomuntu othweswe iziqu eHodges, uzothola kokubili idiploma yedijithali nediploma yomzimba. Imiyalo yokuthola idiploma yakho yedijithali izothunyelwa ku-imeyili yakho yeHodges. Idiploma yakho izothunyelwa ngekheli elisefayilini.
Ngixhumana nobani uma ngithola umyalezo wephutha lapho ngichofoza isixhumanisi ekhasini lokuthweswa iziqu?
Lapho usufake isicelo sokuthweswa iziqu ngokugcwalisa ifomu le-Intent to Graduate, uhlelo lwethu ngeke likuvumele ukuthi uphinde wenze kanjalo. Kungakho ungathola umlayezo wephutha. Uma ungaligcwalisanga ifomu le-Intent to Graduate, sicela uxhumane neHhovisi Lombhalisi ku-239-938-7818 noma registrar@hodges.edu.
Ngiwa-oda kanjani amathikithi okuthweswa iziqu? Uma ngidinga amathikithi amaningi wokuthweswa iziqu, yini okudingeka ngiyenze?
Lapho uqeda ifomu lakho le-Intent to Graduate, bekukhona indawo yokufaka inani lomndeni / abangane abazoba khona. Asiwaphrinti amathikithi okuthweswa iziqu, ngakho-ke uma unemindeni / abangane abengeziwe abangathanda ukuya khona, bamukelekile kakhulu!
Ngingakwazi ukuhlobisa ikepisi lami lokuthweswa iziqu?
Sikukhuthaza ukuthi uhlobise ikepisi lakho! Uyacelwa ukuthi ukhumbule ukuthi kufanele ihlotshiswe ukukhombisa yonke injabulo yokufeza kwakho, noma kunjalo, kufanele yenziwe kahle futhi ngenhlonipho. Sicela ukhumbule ukuthi intshakaza yakho izonamathiselwa kukepisi yakho - ngicela ungafaki noma yini esigqokweni sakho engavimbela intshakaza ukuthi ibekwe ekhanda lakho.
Ngingakwazi yini ukuthatha i-regalia yami emcimbini wokuthweswa iziqu?
Sincoma kakhulu ukuthi UNGALINDI kuze kube umkhosi wokuthweswa iziqu uzolanda / uthenge i-regalia yakho. Sizoba nenani elilinganiselwe kakhulu lokugqoka emcimbini ngobubanzi obulinganiselwe kakhulu. Inketho elula kunazo zonke uku-oda i-regalia yakho noma kunini ku- http://colleges.herffjones.com/college/_Hodges/ kepha usuku lokugcina loku-oda ngu Kwangathi 21, 2021. Abafundi bayakhuthazwa ukuthi ba-ode ama-regalia abo kusenesikhathi ngaphambi kwalesi sikhathi esinqunyiwe ukuqinisekisa ukulethwa ngesikhathi esifanele.
Ngixhumana nobani ngemibuzo yokuthweswa iziqu?
OkweRegalia (ikepisi / ingubo), ama-master hoods, amasentshisi, amafreyimu ediploma, izikhonkwane zokubonga, izikhonkwane ze-alumni, imali yokuthweswa iziqu, njll. universitystore@hodges.edu.
Mayelana namadiploma, izintambo zokuhlonipha, okubhaliwe (ngemuva kokunikezwa iziqu), xhumana neHhovisi Lombhalisi ku (239) 938-7818 noma registrar@hodges.edu
Hlala uxhumekile! #HodgesAlumni
IHodges University Alumni Network iyindlela yakho yokuhlala uxhumekile ekuxhumaneni nenethiwekhi futhi uhlangane noHodges Alum wakho. Azikho izindleko zokubamba iqhaza nezinzuzo eziningi ngokuba yilungu. Uyacelwa ukuthi ugcine i-Alumni Network ivuselelwa nganoma iliphi ikheli kanye nezinguquko zomsebenzi, kanye / noma impumelelo yezobuchwepheshe ukuze sabelane ngempumelelo yakho nabanye. Xhumana nathi ku- alumni@hodges.edu. Ikheli le-imeyili lamanje libalulekile ekuthintweni kwabakwa-alumni nasekutholakaleni kolwazi lwama-alumni.